Yintoni enokuyenza ukuba i-turtle ayifuni ukuyidla
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba i-tortle ayifuni ukuyidla. Kukho izizathu ezininzi zezi zinto: ukhetho olungonelanelekanga lokutya, ukutshintsha kwexesha, izimo ezingafanelekanga zokuvalelwa, izifo ezahlukahlukeneyo. Emva kokuba ulungise izizathu zokuqala ezintathu, unokubuyisela ulawulo lokutya ekuqhelekileyo. Kuthiwani ukuba i-tortle ayifuni ukuyidla, kuba ayizange iguqule kakuhle kwiimeko ezijikelezileyo okanye ibekezelele nasiphi na isifo? Kule meko, ukukhuthazwa kunye nokutya okufakelwayo kuyimfuneko. Ukukhuthaza ukusetyenziswa kwamavithamini kunye neendlela zempembelelo yomzimba. Ukuze kukhuthazwe ukondla, i-vitamins iyanconywa iyanconywa - "B-complex".
Ukuvuselela ngokomzimba, okumele kwenziwe, ukuba i-turtle ayifuni ukuyidla, ezi ndlela zilandelayo zifanelekile: - ukwanda kancinane kwimobushushu; ukuqhuba i-ultraviolet irradiation; zokuhlambela.
Yintoni enokuyenza: i-tortle isenqaba ukuyidla?
Kwimeko apho ezi ndlela zibonakalise zingasebenzi, kufuneka usebenzise isondlo sokufakelwa, oko kuya kukunceda ukubuyisela imisebenzi yesondlo ngethuba. Ngamanye amaxesha kuthatha ixesha elide kakhulu ukuhambisana nale ndlela, kwaye ngamanye amaxesha kubomi beli lwanyana. Kodwa nakwiimeko ezinjalo, nangona kungabonakala kungaqhelekanga, ii-turtles zikhokelela ngobomi obude kwaye bude ngaphandle kokulahlekelwa amandla okuvelisa.
Izithako zeVithamini nezamaminerali
Njengeyiphi na esinye isilwanyana esigcinwe ekhaya, ngaphezu kwe-turtle yokutya esisisiseko sidinga iindidi ezininzi ze-vitamin kunye nezamaminerali, kwaye ngexesha lokwakhiwa kwe-carapace kunye ne-turtle yokukhula kubalulekile. Kwizilwanyana zezilwanyana ungathenga isidlo sesonka kwaye uyongeze imihla ngemihla kwisilwanyana. Ihlumelo idinga amahlanu amagremu omgubo ngosuku. Xa usesitokisini, buza umthengisi ukuba kukho naziphi ii-vitamin ezintsha ezongezelelekileyo zokuhambisa ii-turtles.
Kukho iintlobo ezininzi zeentlanzi zamanzi, kwaye ezininzi zazo ziyakuthanda ukutya kwazo. Ehlotyeni, akunzima ukuyibamba kwilizwe okanye kwindawo yamahlathi, kodwa kubusika kufuneka bagcine ngaphambili. Gcina imihlaba yomhlaba ebhokisini, ngaphambili igalela umhlaba obunzima kwaye ubeke ezi bhokisi endaweni epholileyo kunye nomswakama ofanayo. Ukunyusa iimpethu ukungathobeki kunye nokutya nayiphi na inkunkuma yokutya.
Izibungu ze-Khrushchak zihamba ngokutya eziqhelekileyo, kodwa kufuneka zihanjiswe kwii-turtles ezingaphezu kwephindwe kabini ngeveki, kuba oku kutya kuqulethe i-chitin eqinile, engabangela ukuvuvukala kwe-mucosa yesisu kwisilwanyana, ngenxa yokuba ayifuni kakuhle.
Akunzima ukuphakamisa iKrushchak ecocekileyo. Udinga igumbi elomileyo nelithathakayo, ngokushisa komoya okungenani +27 degrees Celsius kunye nezantsi, ibhokisi eziphuculweyo zetini. I-substrate yinkqashi ebomileyo kunye ne-birch. Ukondla i Khrushchak, ukuvuvukala i-oatmeal, kunye nokutya kwenkunkuma, kuya kwenza.
Kwimeko apho izibungu ze-mealmunk zisetyenziselwa rhoqo ukunyusa i-turtle, kuyimfuneko ukongeza ukondla isilwanyana esinomxholo ophezulu we-calcium.
INdlu kunye neekethi ze-crickets zibhekwa njengeyona nto ekhethiweyo yokutya kwee-turtles. Ukuzigcina zifanelekile ezincinci, kodwa iibhokisi eziphezulu. Ukuphakama kweendonga kufuneka kube ngamasentimitha angamashumi amathathu nangaphezulu. Iibhokisi kufuneka zitshathwe. Ukutshisa, izibane ezinegunya le-25 W zisetyenzisiweyo, ezifakwe ngaphakathi kweebhokisi. Umhlaba uqulethwe ngamaqabunga omhlaba ahlambulukileyo kunye namaqabunga e-birch. Ukondla iikethikiti zingasuswa iifuno kunye nemifuno. Ubukho bamanzi kwiibhokisi zekhenkethi kuyimfuneko.
Ukutya iifudu ezinokutya ziyakwazi ukuxhamla iimpukane kunye neempukane . Ekubeni kunzima ukuzalela ekhaya, ngoko ke, ehlobo, ezi zigibe zenziwa ezi zinambuzane, kodwa ebusika, olu hlobo lwesondlo kufuneka lishiywe.
Ekubeni ekutyeni kwezityalo kufaka inani elikhulu lamavithamini kunye neemaminerali, ukuba khona kwabo ekudleni kwee-turtles kuyimfuneko yokugcina ezi zilwanyana. Njengoko izitshalo zityalo, imifuno, izithelo kunye namajikijolo ngokuqhelekileyo zisetyenziswa. Ukusuka kwimifuno, iibhotile, iinqotyi, iklabishi, imifuno enamagqabi, kunye namaapulo kunye namapheya afanelekileyo. Iibhontshisi kunye neklabishi ziqukethe i-carotene, i-vitamin C kunye neeprotheni ezinomdla ezisebenzayo. Imifuno engenamveliso iqukethe iivithamini kunye neemaminerali. Iinqathi zinefuthe ekuthandeni ukutya, ukugonya ngenxa yemxholo wevithamini A.
Iintyatyambo ze-dandelion kunye namaqabunga omncinci omncinci we-tortle kunye nokuzonwabisa kukutya. Ezi zityalo zisetyenziselwa ukulungiswa, kunye nokuzibamba nezinye izifo.
Iibhereji zidla ngokubandakanya ekudleni kwezilwanyana ngexesha lonyango lwe-stomatitis kunye ne-hypovitaminosis C.
Ukutya okomileyo okomileyo olwandle nolwandle lwamanzi
Ukutya okumeleyo kwongezwa ekudleni kwezilwanyana kanye ngeveki. Ukongezelela kwizidlo ezikhethekileyo, ngamanye amaxesha, iinqanawa zingadla ukutya okumanzi okuqhelekileyo kweenja kunye neekati, nangona ukwakhiwa kwezi zifo akuhambisani neentlanzi. Kodwa ukuba isilwanyana sele sisidla ngokutya kwaye sizinyamekela ngokuqhelekileyo, ngoko ke akunangqiqo ukuwashiya.
Ngoku kutshanje, kuthengiswa, kukho izidlo ezikhethekileyo kwifom ye-granules okanye iiplate, eziqulethe izithako zamamineramin.
Ekubeni i-fishmeal isiseko kwisondlo esiningi, kunye nabanikazi abanolwazi olwaneleyo lokugcina ii-turtles abazifumani ngokutya okunjalo, kubalulekile ukuba bafunde ngokucophelela ukubunjwa kunye nomgangatho wesondlo, kuba kungekho zivithamini kwizifo ezisezantsi. Kwimeko nayiphi na into, unako ukuthambisa ii-turtles ngokutya okumeleyo kungekho kathathu ngeveki. Akusoloko i-tortle iyakudla ukutya okumile, ngoko-ke ulungele oku - isilwanyana kufuneka sisebenzise.
Impembelelo yobudala ekudleni kweentlanzi
Iintlabathi ziyakudla kokutya kokutya kwemifuno kunye nokutya kwezilwanyana, kodwa ngokusemncinci ubudala bakhetha ukudla ukutya kwemifuno.
Nangona kunjalo, ngokukhawuleza kunye nobudala, izilwanyana zikhetha ukutya ukutya. Oku kubangelwa kukuba kwizilwanyana ezikhulileyo akukho mfuneko ye-amino acids kunye ne-calcium, eziyimfuneko kubantu abancinci, kwaye ngokungafani neentsapho zabo ezincinci, abazisebenzisi amandla amaninzi, okumele azaliswe.
Ukutya inyama ye-tortle iyadliwa, kodwa kufuneka ibiliswe imizuzu embalwa ngaphambi kokubilisa ngamanzi abilayo, njengokuba inyama eluhlaza ingabangela i-salmonella. IMvana kunye nengulube kufuneka ikhutshwe ngaphandle kokutya. Iinqununu zentlanzi zinika ukhetho oluninzi kunokuba ludle inyama, kufana nokuba inyama ibilise ngamanzi abilayo, imizuzu emininzi.
Ukuze ukongeze izisombululo zeoli kwiivithamini A, D, E, ekufuneka zibe khona kwisondlo, kuyimfuneko ukufaka imfumba yesisombululo ngesisombululo kwangaphambili. IiVithamini A, E zinikwa kanye kwiiveki ezimbini, i-vitamin D - kanye ngeveki. Ukutya okumile, okugxinwe kwisisombululo samavithamini, ngokukhawuleza uphonswa emanzini.
Indlela yokulahla iphunga lenja
Inkcazo yezinja zohlobo lwePekingese
Ukuziphatha okumangalisayo kwezilwanyana zasekhaya
Indlela yokunyamekela i-hamster
U-Alena Vodonaeva wasala ngaphandle komsebenzi, inkwenkwezi "Doma-2" amaphupha olwaphulo-mthetho
Isobho somsi kunye namabhanana
Iyintoni iphupha leetamatato? Ukutolika kweencwadi ezithandwayo zokuphupha
Umzimba usebenza njani ngexesha lokuya esikhathini?
Ngaba zonke iintombazana zinjengentyantyambo?
Indlela yokudweba i-fox kwisinyathelo sepensile ngesinyathelo
Indlela yokukhetha amakhethini ekamelweni lokulala: iingcebiso ezi-4 ezivela kuma-stylists
Indlela yokwenza i-posture efanelekileyo kumntwana?
Ukukhula nokunyamekela i-daisies
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokulimaza kwimpilo kunye nexesha elifutshane
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kwi-hypothyroidism
I-Myopia yeqondo elide kunye nokukhulelwa
Abavelisi be "Golos" icebo lokubuyela kwixesha lesithandathu ijaji elidala